असन्तुष्ट आवाजलाई विभिन्न ह.त्कण्डा अपनाएर ठेगान लगाउने रणनीति – All top Here
Home/भिडियो/असन्तुष्ट आवाजलाई विभिन्न ह.त्कण्डा अपनाएर ठेगान लगाउने रणनीति
असन्तुष्ट आवाजलाई विभिन्न ह.त्कण्डा अपनाएर ठेगान लगाउने रणनीति
काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले असन्तुष्ट आवाजलाई विभिन्न ह.त्कण्डा अपनाएर ठेगान लगाउने रणनीति लिएको छ । सरकारको वि’रोध गर्ने कसैलाई नछोड्ने नीति लिएको नेकपाले पछिल्लो समय नागरिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि आ’क्र’मण गरेको छ । चितवनको भरतपुरमा कार्यक्रम गर्न खोजेका उनलाई कार्यक्रम गर्न नदिएर सरकारले विरोधीका स्वर त दवाउन खोजेकै हो त्यतिले नपुगेर उनीमाथि निर्मम आ’क्रमण भएको छ ।
भ्र’ष्टाचार वि’रोधी कार्यक्रम गर्न खोजेका भ्र’ष्टाचार वि’रोधी अभियन्ता शाहीलाई शनिबार दिउँसो नेकपा सम्बद्ध विद्यार्थीहरुले गाडीभित्रै आ’क्रमण गरेका हुन्। आ’क्रमणबाट शाहीको शरीरमा चोटपटक लागेको छ । भरतपुरको चौविसकोठीमा आयोजित ‘नेपालका लागि नेपाली’ कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका शाहीलाई नेकपा सम्वद्ध विद्यार्थीहरुले ‘राजावादीलाई कार्यक्रम गर्न दिँदैनौं’ भन्दै कार्यक्रम बिथालेका थिए । त्यसक्रममा केही समय त’नावसमेत भएको थियो ।
नेपाली काँग्रेस चितवनका नेता दिनेश कोइरालाले वैचारिक रुपमा आफू ज्ञानेन्द्र शाहीसंग असहमत रहे पनि आवाज दवाउन सांघातिक आक्रमक गरिनु नि’न्दनिय भएको बताए ।ज्या’न मा’र्ने किसिमले गरिएको यो कदमले कम्युनिष्ट सरकारको नियत झल्काएको उल्लेख गर्दै उनले सत्तारुढ दलको यो गतिविधि माफी लायक नभएको भन्दै तत्काल बन्द गर्न पनि माग गरेका छन् ।
यो आ’क्रमणले गर्दा एकपटक फेरि नेकपा ना’ङ्गिएको छ । गत भदौ २८ गतेदेखि शाहीमाथि आ’क्रमणका थुप्रै प्रयास भइरहेका छन् । त्यो दिनको साँझ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालगञ्जबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बुद्ध एयरको जहाजलाई एक घण्टा कुराएका थिए ।
कार्यक्रम सकेर फर्किदा उनले एक घण्टा जहाज कुराएपछि आ’क्रो’शित बनेका यात्रु उनीमाथि आ’क्रो’शित भएका थिए । मन्त्री भट्टराईले ढिला गर्दा काठमाडौं आउन नपाएका यात्रुले मन्त्री भट्टराई जहाजमा चढ्ना साथ क्लास लिएका थिए । त्यो क्लास लिनेमा भ्र’ष्टाचार वि’रोधी अभियानका अभियन्ता शाही पनि थिए । पटक पटक यस्ता घटनाहरु दोहोरिएको र कसैले पाठ नसिकेको भन्दै उनले पाठ सिकाएको भन्दै यसको जवाफ सामाजिक संजालमा खोज्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
जहाजमा कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि मन्त्री भट्टराईले राति फेसबुकमा लामो प्रतिक्रिया दिने क्रममा अफबाह जोडेर कार्यकर्ता तताएका थिए । एकातिर पटक पटक भीआईपी सवारी र भीआईपीका नाममा जहाज ढिला उडाउने लगायत हवाइ मार्गमा समेत हैरानी बेहोरेर आजित भएका यात्रुलाई मन्त्री भट्टराईले माफीसमेत मागेका थिएनन् ।
मन्त्री भट्टराई कैलालीको सतीघाटमा आयोजना भएको डल्फिन महोत्सवको उद्घाटन गरेर फर्किँदै थिए । जब मन्त्री काठमाडौं आए तब उनको प्रतिक्रिया यस्तो थियो – ‘आज कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा आयोजना भएको डलफीन महोत्सबको कार्यक्रम सकेर बुद्ध एयरको धनगढीको अन्तिम उडानबाट काठमाडौं फर्कने मेरो योजना रहेको थियो । तर कार्यक्रम ढिला भएको कारण बुद्ध एयरसँग अनुरोध गरेर नेपालगंजको अन्तिम उडानबाट काठमाडौं फर्कनेक्रममा केहि ढिला हुन गएको सत्य हो ।
सबै यात्रुको बोर्डिङ भएको करिब १५ मिनेटमा हाम्रो टिमको बोर्डिङ भएको हो। भोली प्रतिनिधिसभामा माननीयहरुको प्रश्नको मैले जबाफ दिने कार्यक्रम रहेको कारण काठमान्डौ फर्कनै पर्ने दबाबमा म थिए । नेपालगंज बिमानस्थलमा ३–४ जना ब्यक्तीहरु आक्रमक शैलीमा मेरा बिरुद्ध प्रस्तुत हुनुभयो।
एकजनाले पारसका बिरुद्ध सातलाख हस्ताक्षर दरबारमा बुझाएर तैले हामीलाई कति दुख दिएको छस् ? त्यो हामीले कहाँ बिर्सेंका छौ र ? सम्म भने। त्यो सुनेपछि उनीहरुको नियत मैले बुझिहाले। सम्पूर्ण यात्रु तथा बुद्ध एयरले देखाएको समझदारीप्रति धन्यवाद ब्यक्त गर्दछु। मेरा कारणले यात्रुहरुमा पर्न गएको असुबिधाप्रति भने क्षमाप्राथी छु ।‘
यो उनको अर्को गलत कदम थियो । त्यसपछि उनले बिस्तारै होश मात्र गुमाएनन् उनका पिएले जनतालाई कुकुरसम्म भने । भदौ २८ पछि शाहीमाथि पटक पटक आ’क्र’मणको प्रयास भएको छ ।
लोकतन्त्रमा कसैलाई बोल्ने अधिकार छैन ? योगेश भट्टराईका कार्यकर्ताले यसरी कुट्दा मुकदर्शक बनेर बस्नुको अर्थ के हुन सक्छ ?
लोकतन्त्रको आवरणमा यसरी नै असहमत आवाज उठाउँदै जाने हो भने दुई तिहाईको दम्भ पालेको सरकारले पाँच वर्ष पनि टिक्न नपाउने निश्चित छ । अहिलेसम्म जनता जागेका छैनन् । जुन दिन जनता सडकमा आउँछन् त्यसपछि दुई तिहाई हराएर जानेछ ।
दुःख गरेर जनताले नै नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याए । गणतन्त्र ल्याए । अहिले विकासका गतिविधि बढाउँदै जानु पर्नेमा नेकपा सरकारले कुनै सम्झनयोग्य काम गरेको छैन । भ्रष्टाचारलाई दिनानुदिन बढवा दिइरहेको छ । अहिले त्यसको विरोध गर्न खोज्नेलाई यसरी आक्रमण गर्ने हो भने के यो सरकार सुरक्षित छ त ?
एक सामाजिक अभियन्तालाई देशका विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम गर्न समेत रोक लगाइएको छ । एक नागरिकले आफ्नो भावना पनि व्यक्त गर्न नपाउनु अधिनायकवाद नै हो। यदि यो सरकारले चित्त बुझ्दो नदिने हो र विरोधका स्वरहरु दवाउन खोज्ने हो भने कुनै दिन यस्तो आँधिबेहरी आउन सक्छ कि त्यसलाई रोक्न सक्ने तागत सरकारले राख्ने छैन।
किनकि जनताले कसलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याए भन्ने कुराको साक्षी इतिहास छ । मन्त्री भट्टराईबाटै सुरु भएको यो बखेडा उनैले शान्त पार्ने प्रयास गरेनन् भने एक भरोषा बोकेका मन्त्रीको भरोषा पनि तोडिदै जानेछ ।
विवाहको पार्टीमा रवि र निकिताले गरे यस्तो रोमान्टिक डान्स, गोप्य पार्टीको भिडियो बाहिरियो
रन्जनाका फेसबुकमा भेटिए यस्तो भिडीयो, बिचरा रवि नेपालमा श्रीमतीको लागि पलपल तड्पे,
भर्खरै झापा बाट आयो यस्तो दुखद घटनाको। खबर
“ज्ञानेन्द्र शाहीको घ’टना पछि ओली र प्रचण्ड ड’राए” –
पाकिस्तानमा विमान दुर्घटननामा ९९ जना यात्रु र ८ जना चालक दलका सदस्यको निधन अन्तिम अवस्थामा यस्तो भनेका थिए पाईलटले (अडियोसहित)